Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta meel mariyay xeerkii lagu aasaasay Midowga Afrika | allsaaxo online
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta meel mariyay xeerkii lagu aasaasay Midowga Afrika
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay Xeerka lagu Aasaasay Midowga Africa ee Khuseeya Midowga Baarlamaanada Afrika, xeerkaas oo shalay ay ansixiyeen Golaha Wasiirada Xukumadda Fedraalka Soomaaliya.
Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay xeerkaas oo sanadihii dambe mugdi gelinayay ka mid ahaanshaha Midowga Baarlamaanada Afrika, Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee Golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad oo Baarlamaanka ka hor akhriyay natiijada ayaa sheegay in si deg deg ah loo hor geyn doono shrcigaan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Dhankale xubnaha Baarlamaanka ayaa isku soo qaaday in ay lacago ugu yaboohaan kumanaanka qoys oo ku dhibaateysan gobolada dalka kuwaas oo kabarakacay fatahaadaha ay sameeyeen Wabiyada Jubba iyo Shabeele.
Guddoomiyaha Cusub ee Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxaan ayaa markii ugu horeeyay maanta shir Guddoomiyay kulankii Baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ka dhacay xarunta Golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.